Mpisolovava fisolokiana ao Peoria IL | Thomas Howard | Antsoy ny 309-740-4033
Oh, ry olon-tsoa rehetra. Nihevitra aho fa mety ho hevitra mety hanakaiky ny mikrofona io. Fa mandehana eto ary tohizo izay nitranga omaly alina tao Springfield, Illinois. Hitanao, tena ara-dalàna ny marijuana. Ankehitriny, rehefa miteny aho fa ny ara-dalàna rongony mariana, dia heveriko fa tokony ho mendrika izany aho. Ny senate Illinois dia nifidy ary nandany ny ara-dalàna ny marijuana. Ary ny fanarahan-dalàna ara-dalàna an'i Illinois dia HB1438. Ary nisy olona nanontany hoe:
Voa amidy hamidy amina otrikaretina- Fankatoavana & takiana
Ny indostrian'ny cannabis dia mbola tamin'ny fahazazany, ka efa ara-dalàna latsaky ny 20 taona lasa. Midika izany fa mitombo ny tsena ary mivoatra amin'ny haavo miavaka. Na dia teo aza izany fitomboana izany dia tsy voafehy intsony ny fitomboana taloha, ny governemanta dia niditra, ary ankehitriny, ny indostrian'ny cannabis dia isan'ireo indostrian'ny fandrindrana.
Marijuana sy dokotera PTSD
Raha ny lalàna Illinois dia mbola manao heloka bevava amin'ny fahazoana rongony amin'ny fialamboly, ny fanjakana dia mamela ny fananana sy ny fampiasana rongony ara-pahasalamana ho an'ireo mitondra karatra rongony. Ireo mpikarakara dia avela hamboly ihany koa ny zavamaniry mba hampiasaina amin'ny fitsaboana, na dia misy aza ny fandrarana mafy amin'ny fizarana mitovy amin'ny marary ho an'ny marary.
Te hiara-hiasa amin'ny sehatry ny valan-jaza ianao?
Hatramin'ny taona 2015 dia mino izahay fa nahatratra ny orinasam-pitsaboana cannabis tsy mitombina izany.
Anontanio ny fanontanianao